Ololaha Guddoomiyaha Baarlamaanka oo bilowday iyo Musharaxiin… – idalenews.com
Ololaha Guddoomiyaha Baarlamaanka oo bilowday iyo Musharaxiin…
Ololaha loogu jiro doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho, saacado kaddib markii Guddoomiye Jawaari uu xaqiijiyay is casilaadiisa, waxaana kulamo looga arrinsanayo xilkaas banaan xalay ka socday Hotelada qaar.
Inkastoo aanay weli jirin Musharax ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, hadana hadal heynta suuqa ku jirta ayaa ah in dhowr Musharax ay damac kaga jiraan xilkaas.
Kulamo tan iyo xalay socday ayaa waxaa uu weji cusub u yeelay hardanka loo geli doono xilka banaan ee Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la doonayo in 15 maalmood gudahood lagu soo doorto.
Xildhibaanadii taageersanaa Guddoomiye Jawaari iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa si isku mid ah u bilaabay ololaha, waxaana la sheegayaa in dhinacii ku mideysnaa Mooshinka Jawaari ay hada dhowr koox u qeybsameen, markii ay soo if baxeen Musharaxiin dhowr ah oo ay kala wataan.
Musharaxiinta illaa iyo hada la hadal haayo ayaa waxaa ka mid ah Maxamuud Macalin Yaxye, Ibraahim Isaaq Yarow oo ah Wasiir kuxigeen, Maxamed Mursal Sheekh Ibraahim oo ah Wasiirka Gaashaandhigga iyo xubno kale.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Musharaxiinta qaar ay gadaal ka riixayaan dhinacyo kala duwan, gaar ahaan Madaxtooyada ayaa wadata dhowr musharax.
Sidoo kale Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan oo door ku lahaa abaabulka Mooshinkii Jawaari ayaa la aaminsan yahay inuu isna wato Musharax gaar ah, waxaana dad badan qiyaasayaan in Shariifka uu ciyaarayo doorar siyaasadeed oo aan la fahmi karin.
Loolanka ugu badan ayaa noqon doona mid ka dhex bilowda dhinacyada ololaha ugu jira xilka banaan ee Guddoomiyaha Baarlamaanka, waxaana maalmaha soo socda bilaaban doona kulamo taxane ah iyo xod-xodasho siyaasadeed oo Musharax walba u geli doono sidii uu u hanan lahaa xilka.
Jowhar iyo Balcad: Ciidamo fariisimo ka sameystay wadada u dhexeysa
XFS oo magacawday Guddi iskaashi iyo wadashaqeyn la sameeya Hey’addaha UN-ka